Eyona, Eyedwarha 2021
Isalathiso Sezifo Sekliniki Yasemayo
Ungayicima njani iMac yakho
Ungayicima iMac yakho ukuba awuyi kuyisebenzisa ixesha elide okanye wenze ukucinywa ngenkani, enyanzela zonke iinkqubo ezisebenzayo ukuba zivale kwangoko. Uneendlela ezintathu zokuvala iMac yakho:
Khetha isitshixo seApple → Cima . Ibhokisi yencoko yababini iyavela, ibuza ukuba uqinisekile ukuba ufuna ukuvala. Cofa u-Rhoxisa okanye ucime. (Ukuba awukhe ucofe nayiphi na indlela, iMac yakho iya kuvala ngokuzenzekelayo emva kwemizuzu embalwa.)
Cinezela uLawulo + Khupha (okanye ucofe iqhosha lamandla). Xa ibhokisi yencoko yababini ibonakala, cofa kwindawo ethi Shut Down.
Cinezela kwaye ubambe iqhosha lamandla Ukunyanzela iMac yakho ukuba icime. Unako nokunyanzela ukuvala iMac yakho ngokucinezela uLawulo + loKhetho + Command + Eject indibaniselwano yesitshixo.
Ngokubanzi, ukuvala amandla kuluncedo ukuba yonke iMac yakho ngokukhawuleza ibambe okanye ixhomeke, iyenze ingaphenduli. Ukuba kuphela yinkqubo enye ebandayo okanye esebenza ngokungacacanga, uhlala ungcono ukunyanzela ukuyeka le nkqubo endaweni yokuvala ikhompyuter yakho yonke. Gwema ukusebenzisa ukuvalwa kwamandla xa kunokwenzeka.
Ukuba awenzi nto xa ubona ibhokisi yencoko yababini ebuzayo, Uqinisekile ukuba ufuna ukuvala ikhompyutha yakho ngoku?, Umatshini uya kuzicima kwimizuzu emibini. Ukuba ufuna ukuvala ngoko nangoko, cofa iqhosha lokuCima. Ukuba utshintshe ingqondo, cofa u-Rhoxisa.
I-ASL: Uyisayina njani iMiqathango yezoNyango kunye nezoBhedlele
UyiTuna njani iGuitar usebenzisa iPipe Pipe
Gcina i-Blushes yakho: Ii-FAQ's kwii-STD
Indlela yokuSebenzisa isiXhobo seMilo yoMakhi womfuziselo
Izinketho zomsindo kwiMicrosoft PowerPoint 2019
INkosana uPhilip, u-Consort ukuya ku-Queen Elizabeth II
I-Coin Toss kunye neKickoff kwiBhola ekhatywayo yaseMelika
Uyenza njani iQela likaFacebook
Indlela yeQela kunye nokuHlanganisa iiDatha zeDatha yeKhowudi yePivot ye-Excel
Intsangu ihlala egazini ixesha elingakanani
Isebenza njani i-ketamine
imibane yamanzi ivale ivalve
Ngaba i-simethicone iyasebenzisana nantoni na
Ipilisi emhlophe zc 01